हिमाल अर्थ – Himal Patrika
इथियोपियाबाट १ अर्ब २० करोड डलरको कफी र…
साउन १२, इथियोपिया । इथियोपियाले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्य बराबरको कफी र तेलहन वस्तु निर्यात गरेको छ । इथियोपियाबाट ठूलो मात्रामा कफी निर्यात हुने गर्दछ । इथियोपिया अरेबिका…
आन्तरिक राजस्व कार्यालय कैलालीबाट रू.३ अर्व ७२ करोड…
साउन १२, धनगढी । आन्तरिक राजस्व कार्यालय कैलालीले रू. ३ अर्व ७२ करोड ६ लाख २५ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/ ०७६ मा अघिल्लो आव २०७४/ ०७५ भन्दा ८ दशमलव ८४…
हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन आयोजना प्रभावितलाई ६ करोड क्षतिपूर्ति
साउन १२, कावासोती । हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय घरधनी र जग्गाधनीहरुलाई करीब रू. ६ करोड क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने भएको छ । प्रसारण लाइन आयोजनाको चितवन–बर्दघाटअन्तर्गत नवलपरासीपूर्व नवलपुर क्षेत्रभित्र पर्ने घर, टहरा…
मुख्यपातोApril 7, 2019
काठमाडौं, २४ चैत । पछिल्ला ५ आर्थिक वर्ष (आव)मा नेपालबाट रू. ८ अर्ब ३० करोडका जुत्ताचप्पल निर्यात भएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांक अनुसार आव २०७०/७१ देखि आव २०७४/७५ सम्ममा उक्त परिमाणमा…
आरोहीबाट रू. २५ करोड बढी रोयल्टी
मुख्यपातोApril 6, 2019
काठमाडौं २३, चैत । यस वर्षको वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहणका लागि हालसम्म ४६ आरोही समूहले आरोहण अनुमति लिएका छन् । ४६ आरोही समूहका १९३ आरोहीबाट शनिवारसम्म रू. २५ करोड ५६ लाख २८ हजार ८३७ रोयल्टी…
मुख्यपातोApril 4, 2019
इलाम २१,चैत । नेपाली चियाले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा अहिले पनि राम्रो बजार लिन सकेको छैन । सरकारी पक्षबाट यसमा चासो नदिएको भन्दै उद्यमी र किसानले आरोपसमेत लगाउँदै आएका छन् । तर, विदेशी चिया बिक्रेताले भने नेपाली चियाको…
नेपाललाई फोहोरी उद्योगहरुको डम्पिङ साइट बनाउन चाहान्नौं :…
काठमाडौं २१, चैत। नेपाललाई फोहोरी उद्योगहरुको डम्पिङ साइट बनाउन नचाहेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । राजधानीमा बिहीवारबाट शुरू भएको साउथ एशियन फेडेरेशन अफ अकाउन्टेन्टस् (साफा) को अन्तरारष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खतिवडाले यस्तो…
स्वदेशApril 3, 2019
सुर्खेत २०, चैत। कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले कर्णालीमा कार्यरत बैंकलाई कर्णालीको प्रांगारिक उत्पादनमा लगानी गर्न आग्रह गरेकी छन् । वीरेन्द्रनगरमा मन्त्रालयद्वारा आयोजित कृषि क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीसम्बन्धी…
बेवास्ता गरेपछि २७ करदाताको बैंक खाता रोक्का
मुख्यपातोApril 2, 2019
चितवन ,१९ चैत । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले लामो समयदेखि बक्यौता नतिरेका २७ फर्म सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का तथा लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कार्यालयका कर अधिकृत त्रिविक्रम तिमिल्सिनाका अनुसार ती करदाताको बैंकिङ तथा वित्तीय…
कोरियाली भाषा परीक्षाको आवेदन मिति सकियो, ९२ हजारले…
मुख्यपातोApril 1, 2019
काठमाडौं १८, चैत। दक्षिण कोरियाले सन् २००८ देखि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत नेपाली श्रमिक लैजाने घोषणा गरेयता प्रत्येक वर्ष भाषा परीक्षामा सहभागी हुनेको संख्या बढेको बढ्यै छ । दक्षिण कोरिया सरकारले सन् २०१९ का…